အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: နောက်မကျတဲ့ အိပ်မက်
21 Responses to “နောက်မကျတဲ့ အိပ်မက်”
ပညာလို အိုသည်မရှိပါ။ မ..ရဲ့ အဘွားကြီးတော်သူဆို အသက် ၅၀မှ စာစသင်တာ။ သူက စာဖတ်ရတာဝါသနာပါတယ်။ သူများကိုဖတ်ခိုင်းရတာ၊ သူများဖတ်ပြတာနားထောင်ရတာ အားနာလာ၊ အားမရဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်စာအရေး အဖတ်သင်တော့တာ။ နောက်.. ကိုယ်တိုင်ဖတ်နိုင်ချိန် ရောက်တော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဘိုးကြီးရဲ့ စာအုပ်တွေကို ၀ါးစားသလိုကိုဖတ်တော့တာတဲ့။ အဖိုးပြောပြခဲ့ လို့ မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဘ၀ အတွေ့အကြုံလေးတွေဟာလည်း တပါးသူအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ခွင့်ရတာ ဘယ်လောက်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလိုက်လဲနော်။
ဟုတ်တယ်နော် ချောရေ ...“ဘ၀မှာ ကိုယ့်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူး”
“ဇွဲ နဲ့ သတ္တိ ” ရှိဖို့ ပဲ လိုတာပါ ..
ဆောင်းပါး ပုံပြင် လေးက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးသားပုံ ကောင်းတယ် ။
ညီမ ရေးထားတာလေး ဖတ်ပြီး အားတွေ တက်သွားတယ်
အင်း ဒါပေမဲ့ ဘာလုပ်ချင်မှန်းကို မသိတော့ခက်နေတယ်
ရွှေစင် ယောက္ခမကြီး (ပေးမဲ့ပေး စစ်စစ် လေး ပေးပါလား)
အစ်မရဲ့ စာလေးက တကယ်ကို စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ ဆေးလောကနဲ့ ဝေးနေရတဲ့ အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပညာလို အိုသည်မရှိပေါ့ အစ်မရယ်။ အစ်မရဲ့ စာလေးကိုဖတ်ပြီး အားတက်မိပါတယ်။
အမ တင်တဲ့ စာအရမ်းကောင်းတယ်အမ
အမသိပါတယ် ညီမလေး က စာကြည့်ရမှာ အရမ်းပျင်းတယ်လေ
“ဘ၀မှာ ကိုယ့်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူး”
အဲဒီစကားလေး က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြောဖို့ မှတ်သွားပါတယ်..
“ဘဝမှာ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှနောက်ကျတယ် မရှိပါဘူး”...တဲ့
အိပ်မက်ဆိုတာ...တကယ်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အဲဒီအိပ်မက်ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ယူလို့ရတာပဲနော်.....
အတွေးလေးတွေထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အားအင်အသစ်လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ မချောရေ....
ဖြစ်ချင်တာတွေကို ထိုင်စဉ်းစားနေရင်သာ အမြဲနောက်ကျ နေမှာပါပဲ
တခုခုလုပ်လိုက်ရဲ့ နဲ့ မဖြစ်လာရင်တောင် ကြိုးစားခဲ့တာပဲ ဆိုတဲ့
ဟုတ်တာပေါ့. . .
ပညာလို အိုသည်မှ မရှိတာ . .
ဘာမှ မလုပ်တာထက် စာရင် လုပ်နေတာက ကောင်းတယ်။
ထိုင်နေတာထက် စာရင် သွားနေတာက ခရီးရောက်တာပေါ့။
ဘ၀ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာစိတ်ကူးတွေနဲ့ တောက်ပလင်းလက်နေတဲ့အရာကိုခေါ်တာနေမယ်။ ခုတလောစိတ်ဓာတ်တွကျနေတာဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး။ ဒီစာဖတ်လိုက်ရတာကိုယ်ကိုယ်ကိုမှန်ကြည့်နေတုန်း မှန်ထဲကအရိပ်က ပြန်ပြောင်ပြနေသလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကောင်းတယ်စာလေးကအရမ်းကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကတော့အောက်ပြုတ်ကျနေတုန်း။ စိတ်ဓါတ်။ တခါတလေမြောင်းထဲတောင် ပြန်ဆင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ် မိုက်ကန်းကန်းနဲ့အတွေးက
သိပြီးသား အသိတရားတစ်ခုပေမယ့် အခုလို ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးဖတ်ရတော့ ရှိထားပြီးသား အသိကို မေ့မသွားအောင် သတိထပ်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ...ကျေးဇူးပါ ငါ့အစ်မရေ....
Thx.....so much အမရေ :)
အဟုတ်ဖြစ်ရမည်....... ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော့်........။
ကျေးဇူး မချော ...
မချောရေ ပို့စ်လေးကောင်းတယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါပဲ
Life is Wonderful ........
ဘ၀မှာ တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ မချောရဲ့ ပိုစ့်လေးက အသိတရားလေးကိုမမေ့အောင်
I fully realized what u want to highlight to solve and console some difficulty we r facing in life after reading.
Deep thanks Ma Chaw Su.
hope to read more and waiting new posts!